လုံခြုံရေးက X-ray စကင်စနစ်, တရုတ် မှစ. စက်လက်ကားကိုစကင်ဘူတာက X-ray Baggage
ဖေါ်ပြချက်:လုံခြုံရေးက X-ray စကင်စနစ်,X-Ray ကိုစကင်စက်,X-Ray ခန္ဓာကိုယ် Scanner,ဘူတာက X-ray Baggage ကိုစကင်စက်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > X-Ray Baggage Scanner > လုံခြုံရေးက X-ray စကင်စနစ်
လုံခြုံရေးက X-ray စကင်စနစ် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, လုံခြုံရေးက X-ray စကင်စနစ်, X-Ray ကိုစကင်စက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, X-Ray ခန္ဓာကိုယ် Scanner R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
X-Ray ကှကျစကင်နာ (MS-5030C)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကုန်တင်လုံခြုံရေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စက် (MS-6550A)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လေဆိပ်စိစစ်စက်တွေ (MS-6550A)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကုန်တင်လုံခြုံရေးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စက် (MS-5030A)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးက x ​​ray စက် (MS-5030A)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးအတွက် X-Ray စိစစ်ကိရိယာများ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လုံခြုံရေးက X-ray စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စနစ်က  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
X-Ray ကှကျစကင်နာ (MS-5030C)
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 5800 / Bag/Bags
X-Ray အိတ်ကိုကင်နာ (မော်ဒယ် # MS- 5030C) MS-5030C X-Ray ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးရေးကိရိယာများလွတ်လပ်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကတီထွင်တဲ့ Single-level ကို X-Ray လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအိတ်ကိုယ်စီကိုင်ထားလက်ကိုင်အိတ်,...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 5200 / Set/Sets
MS-6550A X-Ray အိတ်ကိုကင်နာ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ 650 * 500mm စီးပွားရေးလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေး X ကို Ray ခရီးဆောင်သေတ္တာ Scanner, အကောက်ခွန်က x ray စက်တွေ, မော်တော်ကား xray စကင်နာ, လေဆိပ်လုံခြုံရေး Scanner, X-Ray လေဆိပ်လုံခြုံရေးစကင်နာ,...
MS-6550A X-Ray အိတ်ကိုကင်နာ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ 650 * 500mm စီးပွားရေးလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေး X ကို Ray ခရီးဆောင်သေတ္တာ Scanner, အကောက်ခွန်က x ray စက်တွေ, လေဆိပ်စိစစ်စက်တွေ, X-Ray ခရီးဆောင်သေတ္တာ Scanner, ဒစ်ဂျစ်တယ် X-Ray အိတ်စကင်နာ။...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 3780 / Bag/Bags
Supply နိုင်ခြင်း: 280sets per month,7days
MS-5030A X-Ray အိတ်ကိုကင်နာ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ဤသည်က X-အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းအိတ်ကိုကင်နာနှိုးဆော်သံလမ်းစတာတွေ, ကျယ်ပြန့်လေဆိပ်, ဘူတာရုံများတွင်အသုံးပြုသည TSA က x ray စကင်နာ, Baggage စစ်ဆေးရေးစက်,...
လုံခြုံရေးက x ​​ray စက် (MS-5030A)
MS-5030A X-Ray အိတ်ကိုကင်နာ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ဤသည်က X-အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းအိတ်ကိုကင်နာနှိုးဆော်သံလမ်းကျယ်ပြန့်လေဆိပ်, ဘူတာရုံများတွင်အသုံးပြု, အသံနဲ့အလင်း signal ကိုဖြစ်ပါတယ်, etc ခရီးဆောင်က x ray စက်, Baggage စစ်ဆေးရေးစက်,...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 5600 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 330sets per month,6days
MS-6550A X-Ray အိတ်ကိုကင်နာ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ 650 * 500mm Xray Scanner Baggage စီးပွားရေးလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေး X ကို Ray ခရီးဆောင်သေတ္တာ Scanner, Xray Baggage Scanner,...
လုံခြုံရေးက X-ray စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စနစ်က
MS-5030A X-Ray အိတ်ကိုကင်နာ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: ဤသည်က X-အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းအိတ်ကိုကင်နာနှိုးဆော်သံလမ်း, ကျယ်ပြန့်လေဆိပ်, ဘူတာရုံများတွင်အသုံးပြု, စတာတွေက X-ray Baggage Scanner, လေဆိပ်လုံခြုံရေးက X-ray အိတ်ကိုစကင်နာ, X-Ray...
တရုတ်နိုင်ငံ လုံခြုံရေးက X-ray စကင်စနစ် ပေးသွင်း
လုံခြုံရေးက X-ray စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ system အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအသစ်လည်းဘေးကင်းလုံခြုံကိုယ်ရံတော်ရဲ့လက်ချောင်းပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းနိုင်, အိတ်၏ဓါတ်ပုံများကိုယူကင်မရာများအဖြစ်အိတ်ပိုင်ရှင်၏မျက်နှာကိုနှငျ့အတူရှိ၏။ X-Ray အိတ်ကိုကင်နာကိုထိခိုက်ခံရခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအကြမ်းဖက်ဝါဒအားဖြင့်ပျက်စီးခံရခြင်းမှလူရဲ့အသက်တာကိုကာကွယ်ပေးသည်။ တရုတ်က X-ray အိတ်စကင်နာစျေးပေါဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကောင်းလှ၏။ နှင့်လည်းသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကတန်ဖိုးရှိ 1 နှစ်အာမခံ, ပူဇော်!
လုံခြုံရေးက X-ray စကင်စနစ် X-Ray ကိုစကင်စက် X-Ray ခန္ဓာကိုယ် Scanner ဘူတာက X-ray Baggage ကိုစကင်စက် လုံခြုံရေးက X Ray စက်